ရွှေခါနာန်ဝိညာဉ်အာဟာရက ဓမ္မမိတ်ဆွေများ အားလုံးကို ခရစ်တော်နာမ၌မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ် ခွန်းဆက်သာပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူး တော်ကိုချီးမွမ်းပါတ...
အားလုံးကို ခရစ်တော်နာမ၌မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်
တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ ရှင်ယာကုပ်
သြဝါဒကျမ်းထဲက သည်းခံခြင်း နဲ့ပတ်သက်ပြီး
တော့ဝေဌချင်ပါတယ်။ အသက္သာမွ သည်းခံပြီး
တော့ အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက် သိပ်ပြီးတော့အ
အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာရေးထားပါတယ်။ ယာကုပ် ၁:၂ , ၁:၄ , ၁:၁၂ , ၅:၇ , ၅:၈ , ၅:၁၀ , ၅:၁၁ ရေးထားပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၉ကြိမ်ပါပါတယ်။ အခန်းကြီး ၅ခန်းတာရှိပေမဲ့ သည်းခံခြင်း ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ခဏခဏေရးထားရတာ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် ဒီကနေ့ ယုံကြည်သူတွေဟာ မသည်းခံနိုင်ဘူး ယုံကြည်သူပီသအောင် အသက်မရှင်နိုင်ဘူး ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှ အားကျတယ် ပတ်ဝန်းကျင်တွေ မိုးခါးရေသောက်တဲ့အတိုင်းလိုက်သောက်ချင်တယ်။
ရောမရောက်တဲ့လူတွေက ရောမကျင့်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ ကျင့်ချင်ကျတယ်။ ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့သဘောတော်မဟုတ်ပါဘူး ယုံကြည်သူမှန်ရင် ဘယ်လိုအသက်တာနဲ့ အသက်ရှင်ရမှာလည်း? အခန်း၁:၂ မွေတာ့ ငါ့ညီအစ်ကိိုတို့၊ သင်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်း ကို စစ်ကြောစုံ စမ်းခြင်း အရာသည် သည်းခံခြင်း ကိုပွါးစေတတ်သည် ဟုသိမှတ်လျက်၊ အထူးထူးအပြားပြား စုံးစမ်း နှောင့်ရှက်ခြင်း နှင့် တွေ့ကြုံသော အခါလို့ပြောပါတယ်။ အထူးထူး အပြားပြားသော စုံစမ်းခြင်းကိုတွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာ ဘာလုပ်ဖို့လိုလည်း သည်းခံဖို့လိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အဲစုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်း နောက်ကိုလိုက်သွားဖို့မဟုတ်ပါဘူး အဲဒီစုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်း တွေးဆောင်တဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်း သူတို့လုပ်တဲ့အတိုင်း သူတို့သွေးဆောင်တဲ့အတိုင်း လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘုရားရဲ့အလိုတော်သဘောတော်ကနေပြီးတော့ သာ၍သာ၍ ကျွန်တော်တို့ဝေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။
ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်နဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ သာ၍ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျမ်းစာကပြောတယ် အထူးထူး အပြားပြားသော စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကိုတွေ့ ကြုံရတဲ့အခါမှာ သည်းခံလျှက်အသက်ရှင်ပါ။ အခန်း ၁:၄ မွာ သင်တို့ သည် အလျှင်းမချို့တဲ့ဘဲစေ့စပ်စုံလင် မည်အကြောင်း၊ သည်းခံခြင်း စိတ်သည် အကုန် အစင်ပြုပြင် ပါစေ။ ယုံကြည်သူမှန်ရန် ဝိညာဉ်အသီးထည်းမှာ သည်းခံခြင်း အသီးဟာလည်း တခုပါပါတယ် ချစ်ခြင်း၊ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ နှိမ့်ချခြင်း၊သည်းခံခြင်းပါပါတယ် ဒီအထည်းမှာ သည်းခံခြင်းအသက်သာအားဖြင့် အသက်သာကိုအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင် ဘုရားရဲ့ အလိုတော်သဘောတော်ထဲမှာ ဘုရားနှစ်သက်တဲ့ စုံလင်ခြင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မချို့သက်ဘဲ လမ်းမလွှဲဘဲနဲ့ ဆက်စပ်စုံလင်ပြီး အသက်သာထည်းမှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်ထည်းမှာ အကုန်အစဉ်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ သည်းခံခြင်း စိတ်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ယာကုပ် ၁:၁၂ မွာ စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်း ကို သည်းခံသောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ စစ်ကြောစုံစမ်းခြင်း ကို ခံပြီးမှ သခင်ဘုရားကိုချစ်သောသူတို့အား ဂတိထားတော်မူသော အသက်သရဖူကိုရလိမ့်မည်။ မင်္ဂလာရှိပါတယ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေဘယ်လောက်ဘဲ စုံစမ်းတွေးဆောင်နေပေမဲ့ ဒီအရာကို သည်းခံပြီးတော့ အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာ မင်္ဂလာတစ်ပါးရပါတယ်။ ဘုရားဝတ်၌မွှေ့လျှော်တာလည်း မင်္ဂလာရတယ်။ နှုတ်ကပတ်တော်၌မွှေ့လျှော်တာလည်းမင်္ဂလာရတယ်။ အဲဒီမင်္ဂလာအများကြီးထဲက စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကို သည်းခံခြင်းကလည်း မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြင့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘုရားရှေ့မှာမင်္ဂလာဖြစ်စေမဲ့ အဲဒီအရာကို ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွင်အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီလို သည်းခံတဲ့အခါမှာ ဘုရားက သည်းခံခြင်ူပါရမှီပတွက်ဆုပေးဖို့ရှိတယ်။ စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်း ကို သည်းခံသောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ စစ်ကြောစုံစမ်းခြင်း ကို ခံပြီးမှ သခင်ဘုရားကိုချစ်သောသူတို့အား ဂတိထားတော်မူသော အသက်သရဖူကိုရလိမ့်မည်။ အဲဒီအသက္သရဖူကို ဘုရားပေးဖို့ရှိပါတယ်။
ယုံကြည်သူတွေ သည်းခံခြင်းအသက်သာမှာ အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင် မြတ်သောသရဖူရှိပါတယ်။ လောကမှာ ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့ အသက်တာဖြစ် တာမွက တစ်နေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကို ရှောက်တဲ့အခါမှာ ယုံကြည်သူရမဲ့ သရဖူငါးမျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒီသရဖူငါးမျိုးထဲမှာ စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကိုသည်းခံပြီးတော့ ဝိညာဉ်တဘောနဲ့ တကယ်အသက်ရှင်တာလည်း သရဖူတစ်ခုရဖို့ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်မလိုဒီအရာကမခက်ပါဘူး ဝိညာဉ်ဖမ်းဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး ပေးလှူဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး အသက္တာမွာ စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကို သည်းခံဖို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြောချင်ဒါကယုံကြည်သူပီသအောင် နှုတ်ကပတ်တော် သမ္မာတရားလမ်းက သမ္မာတရားသွန်သင်ချက်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဘဲ သက်မှတ်စွာ အသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင် အဲဒီသရဖူကိုရဖို့ဖြစ်တယ်လို့ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ တိတိကျကျသွန်သင်ထားပါတယ်။
ချစ်သောမိတ်ဆွေ ဒါကြောင့်ဒီအရာက ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်သူတွေမသိလို့ကျော်သွားတဲ့ သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကျော်သွားသောသူမဟုတ်ဘဲနဲ့ သမ္မာတရားကိုသိပြီးတော့မှ ဖော်စားသောသူဖြစ်ဖို့ရန် အတွက်လိုအပ်ပြီမဟုတ်ဘုးလား? ယာကုပ် ၅:၈ မွာ သင်တို့သည်လည်း သည်းခံလျက်စောင့်နေကြလော့။ ကိုယ်စိတ် နှလုံးကို မြဲမြံစေကြလော့။ သခင်ဘုရားကြွလာတော်မူသော အချိန် ရောက်လုနီးပြီ၊ ခရစ်တော်ကြွလာတော့မှဖြစ်တယ် စုံစမ်းခြင်းက ပိုပြီးတော့ ပိုပြီးတော့များလာမှာဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်စိတ်နှလုံးကို မြဲမြန်စေပြီးတော့ စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကို သည်းခံလျက်စောင့်နေပါ။ ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကြွလာခြင်း နီးလေလေ စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကများလေလေဘဲ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် စာတန်ရဲ့အချိန်ကတခဏတာကျန်တော့ဒါဖြစ်တယ်။
စာတန်အချိန်နည်းလေလေ အလုပ်လုပ်လေလေဘဲဖြစ်မှာဘဲ ဒါကြောင့် စာတန္မရ္နက သူအလုပ်ကိုသူလုပ်သလို ကျွန်တော်တို့လည်း ကိုယ့်အလုပ်ကို သာ၍လုပ်ဖို့ရှိတယ်။ ဘာကိုသာ၍လုပ်ရမှာလည်းဆိုရင် သာ၍သည်းခံသောသူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် လိုအပ်ပါတယ်။ ကောင်းကင်မှာ ကိုယ်တော်ပေးမဲ သရဖူရှိတဲ့အတွက် သည်းခံခြင်းက အလကာမဟုတ်ပါဘူး ဒီသမ္မာတရားနှင့်အညီရပ်တည်ပြီးတော့ စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကိုမလိုက်ဘဲ ဘုရားရဲ့အလိုတော်ထည်းမှာ အသက်ရှင်တဲ့သူအတွက် ကိုယ်တော်ကအဲဒီအသက်ရှင်သောသူတွေကို အာခမဲ့ပေးဖို့ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဒီအရာကိုနားလည်ပြီးတော့ တကယ်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်မေတ္တာအားဖြင့်ပြောပြချင်ပါတယ်။ ယာကုပ် ၅:၁၀-၁၁ မွာ ငါ့ညီအစ်ကိုတို့၊ ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကို အမှီပြု၍ ဟောပြောသော ပရောဖက်တို့သည် ဆင်းရဲဆင်းဒုက္ခ တွေ့ြ့ခင်း၊ သည်းခံခြင်း ၏ ပုံသက်သေကိုပြကြပြီဟု မှတ်ကြလော့။
၁၁ သည်းခံနိုင်သောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိသောသူဟူ၍ ငါတို့သည်ခေါ်ကြ၏။ ယောဘသည် သည်းခံကြောင်းကို သင်တို့ကြားရကြပြီ။ ထာဝရဘုရား သည် မိမိအမှုကို လက်စသတ်တော်မူရာမှာ အလွန်သနားစုံမက်တော်မူကြောင်းကိုလည်း သိမြင်ကြရပြီ။
ဒီမွာ သည်းခံခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ယောဘရဲ့ အသက်သာနဲ့ပြောထားပါတယ်။ ယောဘဟာဘယ်လောက်အထိ စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းခံရလည်း တစ်ကိုယ်လုံးအနာရောဂါတွေဖြစ်တယ် ဥစ္စာ၊ဘဏ္႑အကုံလုံးကုံသွားတယ်။ သားတွေသမီးတွေ အကုံဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ သူဘယ်မှာရပ်တည်တဲ့လူဆိုတာ တစ်ယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဆင်းရဲဒုက္ခကို အဲဒီစုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကို ယောဘကလုံးဝ ဘုရားအပေါ်မှာ သစ္စာမပျက်ပါဘူး သည်းခံသောသူဖြစ်တယ် အဲဒီကို သည်းခံသောယောဘကို ကိုယ်တော်ဘုရားက နှစ်ဆသောကောင်းကြီးပြန်ပေးပ်တယ်။
ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့လောကမှာလည်း ဘုရားချီးမြောှက်ကောင်းကြီးပေးဖို့ရှိသလို၊ အထူးသဖြင့်ကောင်းကင်အိမ်တော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ သည်းခံသောသူတို့အား သရဖူကို ကိုယ်တော်ဘုရားဆုချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းအဖြင့်လောကမှာ သမ္မာတရားကိုလေ့လာပြီး၊ သမ္မာတရားကိုခံယူပြီး၊ သမ္မာတရားရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ကိုယ်နော်ကြွလာတဲ့နေ့ရက်တိုင်အောင် သည်းခံလျက်အသက်ရှင်ကျပါစို့။ ကြားနာသူအယောက်စီတိုင်းကို အသစ်တဖန်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။
(တရားဒေသနာ Rev. Saw Kay)